RASMI: Kiiskii labaad ee Korona Fayras oo laga helay xulka qaranka Spain – Gool FM
RASMI: Kiiskii labaad ee Korona Fayras oo laga helay xulka qaranka Spain
Ahmed Nur June 9, 2021
(Madrid) 09 Juun 2021. Kaddib Sergio Busquets oo laga helay Korona Fayras maalmo kahor, xiriirka kubadda cagta dalka Spain ayaa xaqiijiyay kiiskii labaad ee Koofid19 oo laga helay safka xulka La Roja.
Xiriirka Spanish Football Federation (RFEF) ayaa xaqiijiyay in xiddiga difaaca ka ciyaara ee Diego Llorente laga helay xanuunka Korona isagoo noqday laacibkii labaad oo ka tirsan safka xulka qaranka Spain u matalaya tartanka Euro 2020 ee laga helo Fayraska faafa.
“RFEF ayaa ka shalleynaya inuu ku dhowaaqo in ciyaaryahanka caalamiga ah ee Diego Llorente laga helay Korona kaddib baaritaankii PCR ee ay saakay xiddigaha xulka Spain ku mareen xerada tababarka ee ku taalla Las Rozas” ayuu u dhignaa war qoraal ah oo uu xiriirka kubadda cagta dalka Spain xalay si rasmi ah usoo saaray.
Sidoo kale, xiriirka ayaa xaqiijiyay in laacibka lagu qaaday gawaarida caafimaadka si uu u keli-noolaado, waxaana uu haatan noqday laacibkii labaad ee xulkan ka tirsan kaasoo laga helay Koofid19 toddobaadkan gudihiis.
Si kastaba ha ahaatee, maadaama xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA u ogol yahay inay xulalku baddel ku sameyn karaan xiddigaha xanuunnada iyo dhaawacyada daran ay soo gaaraan inta tartanka uu socdo, tababaraha xulka qaranka Spain ee Luis Enrique ayaa qaybta heeganka soo geliyay xiddigaha kala ah Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Méndez, Raúl Albiol iyo Kepa Arrizabalaga kuwaasoo tababar gaar-gaar ah qaadanaya, macquulna ay tahay inay xulka kusoo biiraan haddii loo baahdo.
Aqriso wax walba oo aad uga baahan tahay Copa America 2021... (Tirada xulalka, Guruubyada & xogaha muhiimka ah ee tartanka)